Manni Maree Ministirootaa walga’ii idilee 99ffaa gaggeesseen dhimmota lamarratti murtoo dabarse – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Manni Maree Ministirootaa walga’ii idilee 99ffaa gaggeesseen dhimmota lamarratti murtoo dabarse
On Jun 30, 2021 342
Finfinnee, Waxabajjii 23, 2013 (FBC) – Manni Maree Ministirootaa walga’ii idilee 99ffaa gaggeesseen dhimmota lamarratti murtoo dabarseera.
Manni marichaa waliigaltee liqaa waldaalee misoomaa idila addunyaa waliin taasiifame 4, Chaartara nageenya daandii Afrikaa fi Wixinee labsii Konveeksinii Tiraafika daandii Dhaabbata mootummoota gamtoomanii ragga’uuf dhiyaateerratti mari’achuun murtoo dabarseera.
Manni Maree Ministirootaa Waliigaltee Liqaa Proojektii dhiyeessii humna Elektirikii hawaasa baadiyyaa, dhaabbilee hawaasummaa fi Intarpiraayizootaa raawwachiisuuf kan oolu waldaalee misoomaa idil addunyaa waliin taasiifame Doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.13 ol dhiyaaterratti murtoo dabarseera.
Manni marichaa liqichi Imaammata biyyattii waliin kan walsimuu fi dhiibbaa kan hin qabne ta’uu isaa erga mikaneessee wixinichi gama Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataan akka ragga’u sagalee guutuun qajeelchera.
Akkasumas wixineen labsii Chaartara nageenya daandii Afrikaa fi Konveeksinii Tiraafika daandii Dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyaateerratti erga mari’atee gama Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataan akka ragga’u sagalee guutuun qajeelchuu ragaan Waajjira Muummee Ministiraarraa argame ni agarsiisa.
Hospitaalli Galaanaa Birrii miiliyoona 65 oliin ijaarame eebbifame
Biyyattiitti tarkaanfiin olaantummaa seeraa nageenyaa waaraa fi amansiisaa…
Ityoophiyaan karoora biyyaalessaa ishee galmoota ajandaa 2063 walsimsiisuun hojiirra…
Namni dhuunfaa shuguxii 15 konkolaataa keessa dhoksuun socho’aa ture to’atame
Qormaanni kutaa 12ffaa bara 2014 yuunivarsiitiiwwan…
Ityoophiyaa fi Sudaan rakkoo isaan mudate miira obbolummaa…
Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa Artiistoota adda addaa…
Jilli Itti Aanaa Preezidaantii BMNO obbo Awwaluu Abdiin…
Hospitaalli Galaanaa Birrii miiliyoona 65 oliin ijaarame…
Biyyattiitti tarkaanfiin olaantummaa seeraa nageenyaa waaraa…
Ityoophiyaan karoora biyyaalessaa ishee galmoota ajandaa…
Oduu biyya keessaa14451